आज हरिशयनी एकादशी तथा तुलसी रोप्ने दिन, के छ यसको अर्थ र महिमा ? | आँधीखोला खवर
आज हरिशयनी एकादशी तथा तुलसी रोप्ने दिन, के छ यसको अर्थ र महिमा ?
आँधीखोला खवर डेस्क ५ श्रावण २०७८, मंगलवार ०७:११
आषाढ शुक्ल–पक्षमा पर्ने हरिशयनी एकादशीलाई वैदिक शास्त्रहरूमा एउटा महत्वपूर्ण एकादशीका रूपमा लिईएको पाइन्छ । श्रृष्टिकर्ता भगवान विष्णु यस एकादशीबाट चार महिनाका लागि पातालमा शयन (सुत्न) जाने विश्वास गरिन्छ । त्यहीकारण यस एकादशीलाई हरिशयनी एकादशी र असारे ठुली एकादशी पनि भनिन्छ ।
आजैबाट चीर निन्द्रामा गएका भगवान् विष्णु अर्थात हरि चर्तुमास सकी एकैचोटि कार्तिक महिनाको हरिबोधिनी एकादशीमा मात्र जाग्ने जनविश्वास पाइन्छ । हरिशयनी एकादशीलाई तुलसीरोपण दिवस पनि भनिन्छ । निर्जला एकादशीको दिन छरेको तुलसीको बिउबाट उम्रेको बोटलाई आज रोपेर पूजा गरिन्छ ।
आजर्को भगवान् विष्णुको प्रतीकको तुलसीलाई रूपमा घर–घरमा रोप्ने गरिन्छ । तुलसीबिना भगवान विष्णुको कुनै पनि पूजा आराधनाले पूर्णता पाउँदैन । तुलसी अति उपयोगी वनस्पति हो, यसको पात होस् या फूल सबैले उपयोगी औषधिको काम गर्दछन् ।
वैदिक सनातन दर्शनमा एकादशीको महत्व
यो पनि पड्नुहोस.. भारतद्धारा जारी नयाँ नक्सा तत्काल सच्याउ — प्रदेशसभा सदस्य मल्ल
यो पनि पड्नुहोस.. सार्वजनिक सवारीमा १२ प्रतिशत भाडा बढ्यो ।
आकर्षक पर्यटकीय गन्तब्य बन्दै भालुपहाडको झोलुंगेपुल